Ogaden News Agency (ONA) – Warbixintii Dgaalada een ka helnay Xarunta Dhexe oo ka xogwaramaya khasaare laxaadleh oo cadawga lagu naafeeyay
Warbixintii Dgaalada een ka helnay Xarunta Dhexe oo ka xogwaramaya khasaare laxaadleh oo cadawga lagu naafeeyay
Wararka naga soodhaya gudaha Ogadenia Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya dagaalo ciidamada gumaysiga ee ku sugan halkaa laga wiiqay. Waxay warbixinta xarunta iyo wararka aan sida gaarka ah uga helayno wariyayasha gaarka ah eek u sugan Jigjiga iyo waddanka intiisa kaleba sheegayaan inay dagaalada ay CWXO ku qaadayaan cadawga uu noqday mid maalin walba dhaca oo hadda dhaawaca iyo bakhtiga cadawga uu noqday xad dhaaf isbitaalada buux-dhaafiyay. Dagaaladaa oo cadawga lagaga dilay ciidan kor u dhaafaya 50 askari 5baabuurta dagaalka ah iyo ciidamadii saarnaanana lagu gubay ayaa u dhacay sidan;
4/12/13 Qoriile oo Gobolka Doolo katirsan dagaal CWXO iyo kuwa gumaysiga kudhaxmaray waxaa ciidamada wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare naf iyo maalba leh oo aan wali faahfaahintiisa lahelin.
5/12/13 Jinoole oo Tuulada Caado oo Dagmada Wardheer ee xxarunta Gobolka doolo katirsan kamiin ay CWXO kaxidheen waxaa soogalay kolonyo baabuur ah oo ay ciidamada gumaysigu wateen waxaana goobta lagu gubay 1 baabuur oo kuwa ciidamada ah.
6/12/13 Gabagabo oo Qabridahare katirsan weerar ay N/hurayaasha wadaniga xoraynta ogaadeenya kuqaadeen ciidamada wayaanaha ee halkaas fadhigooduyahay waxayna kugaadhsiiyeen khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
6/12/13 Banbaas oo Baabili katirsan weerar gaadma ah oo ay CWXO kuqaadeen ciidamo uu gumaysigu leyahay oo halkaas kusugnaa waxaa lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahinsiisa lahaynin.
Isla 6/12/13 Laanqayrta oo Dagmada Qabridahare ee xarunta Gobolka Qoraxay katirsan waxaa ciidamada gumaysiga lagaga gubay 1 baabuur oo kuwa ciidamada ah waxaana ku halaagsamay dhamaan ciidankii wayaanaha ee gaadhiga saaraa dhanka kale waxaa goobta gurmad kuyimid ciidamada uugumaysigu leeyahay ee looyaqaano hawaarinta kuwaas oo inta hubkii laga dhigay jeelka lootaxaabay laguna ee deeyay in ay xidhiidh laleeyihiin ciidamada JWXO.
6/12/13 Gadh-abeesaale oo Baabili udhaw dagaal foolka fool ah oo kudhax maray CWXO iyo guwa gumaysiga oo deegaankaas falal budh-cad nimo ah kawaday waxaana goobtaas oo ciidamada cadawga loogu xoog sheegtay lagaga dilay 7 askari 5 kalana waa lagaga dhaawacay.
Isla 7/12/13 Labogoorgudubka oo dagmada Fiiq ee xarunta Gobolka Nogob kamiin ay kaxidheen CWXO waxaa soogalay kolanyo baabuur ah oo uu gumaysigu leeyahay waxaana goobta lagu gubay 1 baabuur oo kuwa cadawga ah.
8/12/13 Wiyilka oo Tuulada Galadiid ee Gobolka Qoraxay katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 10 askari 15 kale oo dhaawac ahna waxaa lageeyay magaalada Qabridahare.
8/12/13 Wiyilka oo tuulada Galadiid ee Gobolka Qoraxay katirsan waxaa ciidamada cadawga lagaga gubay 1 baabuur oo nooca ay ciidanka cadawgu qaataan ah. Dhanka kale deegaanka Buqayso oo dagmada Dhagaxmadow udhaw dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
12/12/13 Calooldheer oo Birqod udhaw kamiin ay kaxidheen CWXO waxaa soogalay ciidamo uucadawgu leeyahay waxaana goobtaas lagu gaadhsiiyay khasaare balaadhan oo aan faahfaahintiisa lahaynin.